पास्ता नुस्खा स्पेगेटी
सेवई दृढ भान्सा मा Housewives मा यसको स्थिति सुरक्षित छ। तिनीहरूले जो फाइबर को धेरै र लगभग कुनै बोसो एक लामो समय को लागि भण्डारण गर्न सकिँदैन मूल्य दायरामा सन्तोषजनक।
पेस्ट - यो केवल एक फरक व्यञ्जन लागि बहुमुखी खाना, तर पनि एक संघटक छ। बस आफ्नो अद्वितीय स्वाद संग एक पेस्ट बनाउन र गंध, यो खरिद उत्पादनहरु फेला परेन गर्न सकिन्छ। पास्ता को संग धेरै स्वादिष्ट छ सस, घिउ मक्खन र पनीर।
पास्ता नुस्खा स्पेगेटी लागि जटिल छैन। प्रक्रिया नै धेरै समय लाग्न गर्दैन। एउटा महत्त्वपूर्ण विवरण - आवश्यकता सकेसम्म पातलो आटा बाहिर रोल गर्न। ताजा पास्ता, यदि प्रयोग, यो फ्रिज मा भण्डारण गर्न सकिन्छ।
आधारभूत आटा पास्ता लागि दुई घण्टौं तयार र अझै पनि साउंडप्रूफिंग र सुकाउने समय लिनुहोस्। , तपाईं पीठो को 450 ग्राम र छिडकाव लागि अलि बढी, नुन को एक चिया चम्चा, चार, अन्डा, आटा को 450 G प्राप्त गर्न वनस्पति तेल र चिसो पानी तीन चमचा एक चमचा लिनु आवश्यक छ।
एक कचौरा मा पीठो र नुन चाल्नु र केन्द्रमा एक प्वाल बनाउन। यसलाई मा एकांतर अन्डा, तेल र पानी मा खन्याउन। राम्ररी सबै सामाग्री पीसने र सँगै मिश्रण। आफूलाई द्वारा आटा आवश्यक आन्दोलनहरु मुछ्नु र चालीस पाँच डिग्री खोल्दै। यो लोचदार र चिल्लो हुन्छ सम्म आटा बारेमा पन्ध्र मिनेट लिन्छ मुछ्नु। सही गरेको छ भने, एक परीक्षण सतह देखिने हावा बुलबुले हुनेछ। मिश्रण पछि, आटा झोला हालिदिए र एक घण्टा कोठा तापमान वा रातारात फ्रिज राख्न कतै छोड्न छ। यसबाहेक, प्रयोग एक पेस्ट नुस्खा स्पेगेटी आटा लागि बराबर चौथाई विभाजित गर्नुपर्छ। एक भाग बाहिर रोल, र प्याकमा बाँकी छोड्नुहोस्। यो तालिका वा बोर्ड को पूर्व-dusted सतहमा सकेसम्म पातलो रोल्ड गर्नुपर्छ। बिदा रोलिङ पछि दस मिनेट सुक्खामा। कि पछि यो कटौती गर्न सकिन्छ। सबै परीक्षण अक्सर आवश्यक छन् संग नै गर्न।
एक निश्चित रंग को पास्ता नुस्खा स्पेगेटी हरियो लागि मसले उसिनेर पालुङ्गो को आटा थप्दा, उदाहरणका लागि सुझाव।
Multicolored पास्ता मात्र होइन छोराछोरीलाई तर पनि वयस्क खुसी र तालिका सजाउनु हुनेछ।
आकार काटन पेस्ट फरक हुन सक्छ।
Lasagna लागि 13 सेमी आकार7को समकोणहरू मा आटा कटौती गर्न, र तिनीहरूलाई प्रत्येक अन्य एक दूरी मा राख्नु धारिलो चक्कु गर्न आवश्यक छ। एक तौलिया संग कवर र समय कम्तिमा एक घण्टा र प्राथमिकताको रातारात सुक्खामा अनुमति दिन्छ। यी समकोणहरू को तयार क्लासिक Lasagna "Bolognese" सस संग।
को Lasagna लागि रूपमा, आयताकार टुक्रा मा आटा कटौती गर्न telyatelle आवश्यक तयारी गर्न। रोल र transversely 12 व्यापक मिमी कटौती गर्न रोल मा प्रत्येक आयत। परिणामस्वरूप स्ट्रिप्स विस्तार र एक भान्सा तौलिया मा राखे, अर्को संग कवर र एक घण्टा र प्राथमिकताको रातारात सुक्खामा छोड्नुहोस्।
को "gnezdyshek" तयार तपाईँले केही परीक्षण स्ट्रिप्स थप्न, तिनीहरूलाई राउन्ड "गुँड" बनाउने, हत्केलामा मा बीम अन्त राख्दै, मोड आवश्यक छ। को स्ट्रिप्स घडीको घुमाइयो गर्नुपर्छ। आधा - परिणाम "गुँड" पीठो संग dusted कन्टेनर, मा राख्न, एक घण्टा सुक्खामा छोड्नुहोस्। तपाईं फ्रिज मा भण्डारण गर्न सक्नुहुन्छ।
एक पेस्ट कसरी तयार स्पेगेटी र सेवा
तयारी र त्यहाँ विशिष्ट मतभेद पेश को प्रक्रिया मा, तपाईं एक सुक्खा वा ताजा पास्ता तयार छ भने। 75 G वा एक व्यक्ति लागि सुकेको ताजा को 225 G - इटालियन पास्ता स्पेगेटी द्वारा 50 गणना गरिएको छ। को पेस्ट हरेक 450 G लागि पानी बारे 3.5 लिटर पहिले यो नुनीन लिएको हुनुपर्छ। पानी उम्लिरहेको गर्दा, पेस्ट पानी तापमान कम छैन भनेर, बिस्तारै र ध्यानपूर्वक कम छ। स्पेगेटी सारा बीम राख्न र धेरै ध्यान दिएर बित्तिकै तिनीहरू नरम सुरु रूपमा कम गर्न राम्रो छ। पानी मा, पास्ता बिभाजनमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। यस पट ढक्कन कवर आवश्यक छैन। पास्ता नुस्खा स्पेगेटी अल Dante को अवस्थामा पकाउने समावेश - को खानको जब उत्पादनहरु थोडा कठिन हुँदा छ। एक colander गुना र पास्ता तुरुन्तै सेवा गर्न सक्नुहुन्छ।
आलु, पन्नी मा सुखा ओवन मा पकाएको
"Nimesulide" - यो के हो? "Nimesulide": प्रयोग, संरचना, analogs, समीक्षा लागि निर्देशन
नाम "लेम्बोर्गिनी" को कथा: को साँढे चिन्ह अन्तर्गत
पट्टी "perinki Frejka"। एक पट्टी "perinki Frejka" कसरी लगाउन?
अन्ना Bogdanova: जीवनी र काम
"पापा कार्लो" रेस्टुरेन्ट (मास्को)
भियतनाम रिसोर्ट्स र देश को मुख्य आकर्षण
साना बहिनी संग के गर्न? विचार वजन!
कार्य "एक्सेल": निर्माण गर्न कसरी